Jacaylka Rabbi WQ.Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub |
Jacaylka Rabbi WQ.Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub
Hargeisa(GNN):-Waa ay sahlan tahay in qofku si fudud u yidhaa, “Waa aan jecelahay Rabbigay.” Se aanu ka dhabayn jacaylkaa hab-dhaqankiisa. Laga yaaba in aanu garanayn jacaylka laga raba waxa uu yahay. Erayga ‘jacayl’ waa eray loo adeegsado waxyaalo kala geddisan oo ku yimaadda dareenno kala duwan oo siyaalo kala jaad ah uu qofku ula kulmo ama u dareemo. Halkaa erayna loo wada adeegsado. Sida aynu carrabaawnay adeegsiga eraygaa ayaa kulmiya dareenno kala jaad ah oo halkaa eray un wada ah. Tusaale ahaan; dareenka ilmuhu waalidkii ku qaabilo ee naxariiseed ayaa la odhan karaa waa jacayl uu cid walba ka jecel yahay waalidkii, rabbaynta iyo ilaalintaa darteed. Waalidku ilmihiisu in uu yahay cad laga beeray darteed ayaa keenta in ay u qaadan jacayl waalidnimo. In ay koritaankiisa ka hormariyaan baahiyahooga gaar ahaneed. Dareenada keena in qofku wax jeclaado waxa ka mid ah soo jiidasho uu qof kale si niyad ah u doono in loogu yeedho jacayl. Sidoo kale jacaylka lammaaaha nolosha wadaaga oo ah ka dhabta. Qofku saaxiibkiisa gaarka ah ee uu dadka ama asxaabtiisa ka xigtaysto oo uu talo iyo hogo tusaalaynba ka helo waxa ka dhexeeya jacayl saaxiibtinimo. Haddaynu intaa kaga nimaadno qeexista erayga ‘jacayl’, waxa hubaal ah qofka aad leedahay, “waa aan jecelahay.” In mar walba aad ku dadaashid raali gelintiisa iyo in aanad marna tusin wax uu kohdo oo u dhibsado. Taas oo keeni karta cadho xaggiisa kaaga timaadda ama xidhidhkiina wax yeesha. Qofkaasi ha ahaado; waalidkaa, ubadkaaga, lammanahaaga nolosha kula wadaaga ama saaxiibkaaga dadka kugu dhow’e jacaylkaa idinka dhexeya waxa uu ku jaan go’an yahay inta xadhigaa idin xidhiidhshaa idin dhexeeyo.
Haddii aad is jiidhaan wuxu jacaylkaasi isku badalaa nacaybshiyo idin kala kaxeeya; waalidkaa kaa fogaynaya, ilmahaaga kaa durkinaya, lammaanihii furiin ku sababaya, saaxiibkaana idin kala dilaya.
Haddaba aynu u soo noqono maqaalkeene jacaylka laynaga rabaa in aynu Rabbigeen SWT jeclaana xukunkiisu muxu yahay?.
Xadiis-Qudsiga Imaam Maalik kitaabkiisa Muwada’a darajada saxiixa uu ku soo saaray, Mucaad Bin Jabalna uu warinayo, Rasuulku CSW waxa uu Rabbi SWT ka wariyey, “Waxa aan waajib ka dhigay in la i jeclaado.” Halkaa waxa aynu ka arkaynaa in Jacaylka la jeclaanayo Rabbi uu yahay waajib. Xadiis-Qudsiga Bukhaari uu soo saaray ee uu Abu Hurayra warinayo, Rasuulku CSW wuxu Rabbigii ka wariyey, “Igu ma soo dhawaado addoonkaygu arrin aan ka jecelahay ka aan ku waajibiyey.” Ilaahay SWT isaga oo ergaygiiisi la hadlaya wuxu inoo tilmaamay haddaynu jecelnahay in aynu qaadno dhabbada uu inoo tilmaamayo ergaygiisu, suuradda Al-Cimraan Korreeye wuxu ku yidhi, “Waxa aad ku tidhaa ‘Maxamedow’ haddaad jeceshihiin Ilaahay i soo raaca, Alle wu idin jeclaan oo dambigiinana wuu dhaafiye.” Dhowr jeer waxa aynu ku celcelinay jacaylka astaantiisu in ay tahay raali-gelin aad u muujinayso cidda aad jeceshahay. Haddaba Korreeye jacaylka aad leedahay waa aan jecelahay waxa caddayn u ah sida aad uga amar qaadatid, waxa uu ku farayna u fulisid waxa uu ku diidayna aad uga dheeratid, intaa haddii lagaa helo jacaylkaasi waa mid dhab ah. Yuhuudda iyo Kiristaanku waxa ay odhan jireen sida Sarreeye kaga warramayo suuradda Maa’ida, “Waxa aanu nahay ubadkii Alle ee u jeclaa.” Korreeye wuxu ugu jawaabay, “Maxaa la idin cadaabaya haddaa.” Qofku isku heli maayo in u sheegto jacaylka Rabbi iyo in aanu ka dhigin jaan-gooyaha noloshiisa, wuxu inoo soo diray jare-barihii nolosheena, kaa inta aynu tubtiisa qaadnaa waa inta aynu Ilaahay raali gelinayno. Suuradda Nisa’ Korreeye wuxu ku yidhi, “Qofka addeeca ergaygayga waa qof Alle addeecay.” Ergayga Alle inta aynu u dhego nuglanaynaa waa inta aynu dar-leef ka badbaadayno, haddaynu dar jiidhnana Ilaah suuradda Qasas wuxu innagu leeyahay, “Haddii aanay ku dhego nuglaan, ogow rabitaankooga ayaa ay raaceene.”
Astaamaha qofka jecel Rabbi
In aad ku toosnaato waddadiisa, ergaygiisana aad raacdo wuxu ku faray. Waxa u daliil ah suuradda Al-Cimraan Korreeye wuxu ku yidhi, “Waxa aad ku tidhaa ‘Maxamedow’ haddaad jeceshihiin Ilaahay i soo raaca, Alle wuu idin jeclaan oo dambigiinnana wuu dhaafiye.”
In aanay ku sinnaan gaal iyo islaam marna ba, Korreeye suuradda Maa’ida marku kaga hadlayey duulka astaamahaa leh wuxu sheegay, “Kuwa iimanka laga helow, kii ka riddooba diinta, Alle wuxu keeni duul uu jecel yahay, iyagu na jecel, mu’miniinta u tun jilicsan, gaalada u daran.”
In aad ku dadaasho sugidda iyo oogidda salaadaha sunnaha ah, iyo sadaqada, soonka sunnaha ah, sidoo kale aad ku dadaashid haddaad karto cimrada. Xadiis-Qudsigii aynu kor ku soo sheegnay waxa ku jiray in Korreeye ku yidhi, “Ma daayo addoonkaygu in u igu soo dhawaado samaynta ‘Nawafisha’ ilaa aan ka jeclaado.” Nawaafishu waa intaa aynu soo kor ku soo sheegnay.
Ugu horrayn haddii uu Ilaahay ku jeclaado waxa aad helaysaa raali ahaanshihiisa, waxa aadna ka badbaadaysaa naarta, waayo waxa aad la timid waxqabad togan oo kaa furdaamiya gelidda albaabbada loo cadhaysanayaasha. Xadiis-Qudsiga Bukhaari soo saaray, Abu Hurayra leeyahay Rasuulku Rabbigii wuxu ka wariyey, in Rabbi yidhi. “Haddu Alle addoon jeclaado, wuxu u dhawaaqa Jibriil, dabadeed u sheega in uu hebel jecel yahay, Jibriil waa jeclaada, wuxu isna u dhawaaqa ehlu samada una sheega in hebel Rabbi jecel yahay, iyaguna waa ay jeclaadaan, cidda dhulka joogtaana ay jeclaadaan.” Dhammayn mayno haddaynu is nidhaa tiriya waxqabadyada tolmoon ee loogu dhawaado ama sababa jacaylka Rabbi, se waxa aynu ku soo ururin lahayn jacaylka laga hadlayaa waa qofka oo raaca dhabbada lagu helayo jacaylka Ilaahay SWT isna uu ku badhaadhi if iyo aakhiro .
Tallo iyo tusaale ba waa xaggiina.